DEG DEG DAAWO: Somaliland oo Ku Dhawaaqday Go'aan Ka Nixiyay Askartii isku dhiibtay Puntland - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
DEG DEG DAAWO: Somaliland oo Ku Dhawaaqday Go’aan Ka Nixiyay Askartii isku dhiibtay Puntland
Jun 1, 2019 - Comments off
Xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay in la Maxkamadaynaayo askari walba oo ka goostay Somaliland ee aada maamul kale.
Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye, ayaa ku tilmaamay qaran-dumis saraakiishii ka tirsanaa ciidanka Somaliland ee dhinaca Puntland u goostay. ﻿
Wasiir Caateeye waxaa uu sheegay in ay maxkamad soo taagi doonaan saraakiisha goostay ee shalay isku dhiibay Maamulka Puntland oo Somaliland ay ku dagaalsanyihiin deegaano iyo degmooyin ka titrsan Gobolka Sool.
Sidoo kale waxaa uu beeniyay in ay amar ku bixisay xukuumadda Somaliland in la weeraro Magaalada Badhan ee Gobolka Sool oo ay sheegeen Saraakiisha shay isku dhiibay Puntland in lagu amray in ay weeraraan Magaalada Badhan oo ay suganyihiin masuuliyiin ka tirsan Puntland.
Amarka ka soo baxay Xukuumadda Somaliland ee sheegaya in la Maxkamadaynaayo askari walba oo ka goostay Somaliland ayaa kusoo beegmaaya xilli ay ciidamo ka tirsan kuwa difaaca Somaliland ay isku dhiibeen Puntland.